Android 5.1.1 inomhanya pa galaxy note 4 mumabenchmarks; inogona kuve 64-bit yakagadziridzwa
Kuru Nhau & Ongororo Android 5.1.1 inomhanya paGreen Note 4 mune mabhenji; inogona kuve 64-bit yakagadziridzwa
Iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 4 iri mumutsara weiyo Android 5.1.1 yekuvandudza, maererano neshumo pane iyo nyaya. Iyo phablet, iyo ichagadzira nzira yeiyo Galaxy Cherechedzo 5 mukati memwedzi yakati wandei, yakatora izvo zvaiita kunge zera kutora Android 5.0 Lollipop, asi sekureva kweSamMobile, kuyedzwa kweiyo Android 5.1.1 kuri kuitika.
Iyo Samsung-yakatarisana blog yakagamuchira AnTuTu mabhenji anoratidza Android 5.1.1 inomhanya paGreen Note 4. Sezviri pachena, Samsung inogona kunge iri kuyedza 64-bit kuvaka paCherechedzo 4, kunyange izvi zvichifungidzirwa kuva zvakawanda zvetariro zvishoma kufungidzira pane zvingangoitika pakupedzisira.
Kunyange iyo Galaxy S6 kana S6 kumucheto vasati vagamuchira Android 5.1.1, uye tichifunga nezvekuti akakosha sei mafoni maviri kuSamsung, iyo yekumirira nguva dzose yekuvandudzwa inoita kunge inonetesa. Sezvo varidzi veS6 duo vachiri vagere pamaoko avo vachitarisira iyo OTA, zvingangoita kuti iyo Galaxy Note 4 ichave isingaone Android 5.1.1 kusvika imwe nguva mushure, izvo zvinogona kunge zviri mavhiki kana nemwedzi kure.
AnTuTu inoratidza Android 5.1.1 pane Cherechedzo 4
Tichirangarira kuti zvakatora nguva yakareba sei kuti Android 5.0 ibude paCherechedzo 4, isu hatifanire kuwana tariro yedu zvakanyanya ikozvino, kunyanya sezvo 'kunonoka kusingatarisirwi' uye Android chikuva chinoita senge chiri kuenda-ruoko. Asi zvirinani kuti danho rekuyedza riite kunge rakatanga, uye kana uye kana isu tikanzwa zvimwe, isu & apos; tichazvivhara pano paRunhareArena.
droid turbo 2 mutengo wekutengesa
chinyorwa 20 vs chinyorwa 20 ultra
Yakanakisa Samsung Galaxy Z Fold 2 5G madhiri uye mitengo kuVerizon, AT&T uye Best Buy
Heano & maapos ekuti vanyoreri veVerizon vanokwanisa sei kutora gore rimwe remahara reDisney +
Samsung inoburitsa Gear S2 Classic Rose Goridhe uye Platinum smartwatches
Yakanakisa mafoni eAT & T ekutenga mu2021
Maitiro ekugadzira mobile Chrome browser pa Android kuverenga webhu zvinyorwa zvinonzwika kwauri
Xfinity Mobile inoratidza yakanakisa Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro madhiri